सुन तोलाको ७० हजारसम्म पुग्न सक्ने ! | Janakhabar
सुन तोलाको ७० हजारसम्म पुग्न सक्ने !
काठमाडौं, ११ असार । गत सातादेखि लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ । सोमबार प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य मंगलबार तोलामा ५ सय बढेर ६५ हजार रुपैयाँ ५ सय पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको असर स्थानीय बजारमा परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका अनुसार तोलामा ६५ हजार ५ सय मूल्य अहिलेसम्मकै रेकर्ड हो । महासंघका अध्यक्ष मोहन विश्वकर्माले अमेरिका र इरानबीच भएको द्वन्द्वका कारणले सुनको मूल्य अकासिएको बताए ।
यसअघि २०७० भदौ १२ गते सुनको मूल्य तोलामै ६३ हजार ३ सय पुगेको थियो । मूल्य घटबढ हुँदै २०७५ फागुन ८ गते पनि ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।- कारोबार दैनिक